Shina Roman Blinds Exporters and Company | ETEX
Lamba mainty jamba mainty
Jacquard Blind lamba
Roller Blind lamba
Damba vita amin'ny akora
Lamba vita amin'ny lavenona / romana
Siom-bary mihidy vonona
Jamba feno Vonona
Jamba Zaridaina vonona
Ireo singa anglisy anglisy
Vaovao momba ny fampiratiana
Jacquard Roller Blind lamba
Lamba mainty jamba mainty Roller
Alefaso anay ny mailakaDownload as PDF
Romana Blinds nahazo aingam-panahy tamin'ny lamba fanamboarana malefaka izay manome fahatsapana malefaka sy malefaka ho an'ny efitra.
● Rafitra: Rafitra fanaraha-maso / kordika
● Modely: Lemak, Jacquard, Flocking, Blackout, Translucent, lamba, lamba
● lamba: Fitaovana karazana fanendahana
● Fitaovana fiarovana ho an'ny jamba tsirairay
Ireo jamba romana mahazatra dia mitafy ny varavarankelinao miaraka amin'ny fangatahana mahafinaritra. Na tianao ny modely nentim-paharazana ho an'ny lakozia, na ny jamba marika mody floral ho an'ny efitra fisakafoanana, Tsara ho an'ny famerana ny tara-masoandro rehefa mila izany, ny jamba roman dia mora ampiasaina sy manaingo. Misintona fotsiny ny kofehy hanitsiana ny jamba lamba amin'ny haavony izay ilainao amin'ny varavarankelinao mba ahafahan'ny jamba vadinao mamorona fiangavian-tsolika amin'ny endriny maharitra. Ny jamba romana dia mety amin'ny fametrahana maromaro. Mamorona fijery Mediteraneana miaraka amin'ny jamba marobe amin'ny efitra fatoriana, na manaova afovoany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinao miaraka amin'ny jiromainay romanina amin'ny varavarankely amoron-dranomasina.
Roman Blinds malaza ampiasaina amin'ny haingo an-trano, birao, hotely, kafe, trano fandraisam-bahiny ary maro ny toerana ho an'ny daholobe. Izahay dia afaka mamokatra araka ny haben'ny antsipirian'ny ilaina amin'ny tsena samihafa.
Ny jamba Romanina dia mora apetraka, mora ampiasaina, azo sasana ary mora ny manadio.
Ny jamba mariazy miasa dia tsy voatery ho tsotra sy tsotra. Izahay dia manolotra jamba mainty hoditra izay tonga amin'ny lamba isan-karazany misy tsipika sy modely mifanaraka amin'ny firavaka efa misy eo aminao. Safidy lehibe ho an'ny lambam-baravarana, ny jamba mainty hoditra dia manisy marika matevina hialana ny jiro rehefa mila ary manome tsindrona fanampiny ianao, mihazona anao am-pandriana lavitra kokoa raha mila ilaikitra fanampiny ianao.
Jamba Romanina amin'ny loko maro isanisany, fotsy, volondohany, mena, mavokely, manga, maitso, kiraro, voajanahary ary maro hafa. Ny lamba rehetra mety ho an'ny mpanjifa dia azo noforonina ao amin'ny kitapom-bolon-tsofina ary milina fanamboarana lamba.
Previous: Jamba Zaridaina vonona
Manaraka: Ireo singa anglisy anglisy
Telefaonina: +86 510 83391551
Ny akanjo mainty farany tsara indrindra ho an'ny ...
R + T World's Trade Trade F ...
Fandehanana fifehezana kalitao avo lenta Etex